Indlu esemaphandleni iCasa Salinero ngaselwandle - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni iCasa Salinero ngaselwandle
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uNadia iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ngaphandle kwezokhenketho ze-mass, ezilungiswe ngaphakathi kweentyantyambo zetyuwa zaseBocacangrejo, ngaselwandle, ezijikelezwe yi-flora ezenzekelayo, ubulula bendlu kukumema ukuba uphumle, wonwabele ukudibana nomhlaba, amanzi, umoya, indalo...
Unxibelelwano lwe-intanethi luphawu oluvela kwiofisi ekufutshane.
COFA kwifoto YEPROFAYILE yam ukuze UBONE EZINYE IZINDLU
iivinji ZOKUNCOKOLA ze-casalinero (fb e IG):
casasalinero - Ikhitshi, elinefriji, i-microwave, i-blender kunye nezinto zokupheka.
- Igumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini nebhedi epakishwayo kwigumbi lokuhlala.
- Ibhedi yeentsana.
- Amanzi ashushu kwigumbi lokuhlambela.
IITAWULI NEZINTO ZEBHEDI ZIKHONA
I-intanethi ye-WiFi isignali esuka kwiofisi ekufutshane. Iyakhawuleza kakhulu kwaye izinzile.
- Izitulo, itafile kunye ne-hammac ngaphandle kunye nendawo yokoja.
- Umatshini wokuhlamba impahla xa kuza kuhlalwa ixesha elide.
I- "Casa del Salinero" inomhla we-1889 kwaye yayikade ihlala umsebenzi wetyuwa. Ukugcina isimbo sokwakhiwa kwe-canarian, le ndlu isemaphandleni yakudala iye yalungiswa yayiyindawo yokuhlala yasemaphandleni. Iindonga zamatye ezibanzi zikhusela emoyeni naselangeni, nto leyo eyenza ibe neqondo lobushushu eligqibeleleyo.
Le ndlu isemaphandleni yayakhiwe ngohlobo lwe-canarian. Iindonga ezibanzi zidibanisa amatye olwandle kunye nomxube wezinto apho isanti ihamba khona. Le ndlela yokwakha ihambelana nomhlaba ongaphandle nendawo ehonjiswe ngendlela yakudala nethandekayo ngaphakathi.
Ijikelezwe yiflora enomtsalane, ubulula bendlu ikumema ukuba uphumle, wonwabele ukudibana nomhlaba, amanzi, umoya, indalo...
Ebusuku, ukungabikho kwezinto ezikhanyayo kukwenza ubone izulu elinamandla, ukuya kwinkwenkwezi yokugqibela. Ibe ubusuku obungapheleleyo benyanga buba ngubusuku obumangalisayo kunye nokukhanya kwamakhandlela. Kuyafaneleka ukuba uvuke kwangoko uze wonwabele ukuphuma kwelanga. Ngentambama, ilanga lifihla emva kweentaba lifa yonke into yegolide.
Ukuba ufuna ukuzola kwendalo nolwandle, le yindawo yakho. Awuzukufumana amatye abakhenkethi, okanye iibhari zaselwandle ezikufutshane.
Yindlu esemaphandleni kuphela, ulwandle kunye nawe.
4.40 out of 5 stars from 64 reviews
4.40 · Izimvo eziyi-64
I-Casa Salinero ikumgama weekhilomitha eziyi-8 kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya. Ifakwe kwimayini yetyuwa yendalo eBocacangrejo, ePlaya de Vargas, eAgüimes. Indawo eseMzantsi-mpuma ayiyondawo yokhenketho, eyona nto iphambili kule ndawo kukulima. Ii-courgettes, ii-cabbages, iitapile kunye neetomato zikhula kwizindlu eziluhlaza ezikhuselwe ilanga nomoya. Ukufikelela kwindlu esemaphandleni kwindlela enamatye enothuli kwindawo yasemaphandleni kubonisa indawo yaseCanarian engenayo nantoni na enento yokwenza neehotele ezintle kumazantsi esiqithi.
Indawo ekuyo indlu ikuvumela ukuba ususe ungcoliseko lwedolophu, wonwabele ukuzola okumangalisayo. Nangona kunjalo, ikufutshane kakhulu "nempucuko" kwaye kufikeleleka lula kwiindawo ezifana neevenkile zokutyela, amayeza, izikhululo zegesi kunye nolwandle. Ukuba ufuna ukuhamba, ungaya kunxweme lwe-El Burrero, ilali encinci yabalobi. Olunye unxweme olukufutshane yiPlaya de Vargas okanye iCabrón, apho unokukwazi nokudayiva nge-scubba. I-Arinaga yidolophu encinci engaselunxwemeni ekufutshane, kunye nezokhenketho zasekuhlaleni, iilwandle ezinentlabathi kunye nepuli yendalo, i-el Zoco del Negro. I-Agüimes, ilali enomtsalane, ikwiikhilomitha eziyi-10 kuphela kwaye kulula ukuyifikelela.
Ukubhalisa xa ufika: Iindwendwe ziza kwamkelwa EMINI kwindawo ekudityanelwa kuyo ukuze ziye kunye kwindlela yokugqibela eya endlini. Kunyanzelekile uqeshise NGEMOTO.
Ixesha lokuphuma: Ixesha liza kulungiselelwa ukubuyisela izitshixo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Agüimes